Mugwagwa Wemangwana reKutengesa
Svondo, July 13, 2014 Muvhuro, March 16, 2015 Douglas Karr
Kuirovera. Ndozvandakafunga ndichingoona iwo mufananidzo pazasi kubva kuMediaPlant's mushumo wakatsigirwa neMicrosoft, Madhora, maBits, uye maAtomu: Mugwagwa Wekusvika kuRamangwana reKushambadzira. Iko kutarisa kwakanyatsofungidzirwa uye kunoshanda kwekuti tekinoroji irikushanduka sei kuti igone kunyatsoita nzira dzekutengesa. Mumwe dhizaini wakabuda pachena sezvo isu tanga tiri kubatsira makambani kuvandudza avo epamhepo ekushambadzira nzira saka ini ndazviisa pazasi. Kushambadzira kuri mumamiriro ekuchinja,
Brook Mazuva ese: Tsvaga iyo Yakanyanya Tweets yekufarira
Chitatu, Kurume 19, 2014 Douglas Karr
Ndichiri kutevera akawanda maakaundi pa Twitter, ini handiteedzere chaizvo maakaundi. Twitter irukova rwandinofanira kutarisisa zuva rese kana ndaida kutora rese ruzivo ini rwandaida kwariri. Ndichiri kuda Twitter uye chishandiso chinoshamisa, kutsvaga maturusi ayo anotendera iwe kudzora zvirimo kunobatsira chaizvo. Brook inokutendera iwe kuti ugadzire zvikamu uye wobva watevera maakaunzi eTwitter mukati meaya mapoka.
Vanhu vanowanzo kundibvunza kuti munyika tinokwanisa sei kuwana nekunyora nezve akawanda kwazvo matekinoroji ekushambadzira kunze uko. Ichokwadi kuti tinodzikwa zvishoma nevashandi vehukama neruzhinji, asi Martech Zone haisi saiti yenhau - tiri saiti kubatsira vashambadzi kuwana tekinoroji yavanogona kuwedzera. Mazhinji maturusi atinogovana ave aripo kwenguva - asi vanogovana nzira kana chimiro icho
Makambani ane makuru ehupenyu marongero haasi kudzikamisa kukosha kwechirongwa chavo kune zvemukati izvo ivo voga vanonyora. Pane hukuru hwakawanda hwezvinhu zvinorova pawebhu sekondi yega yega… zvimwe zvakanaka, zvimwe zvakaipa. Iko kugona kwekubaya mukati meiyo firehose, kuburitsa matombo, uye kuigovana nevateereri vako mukana wakakura pamusoro pevanokwikwidza. Kana iwe ukave iwe wekutanga sosi yeruzivo kune ako tarisiro uye vatengi, ivo havafanirwe kutarisa